watchOS 6 ine nhau mune yehutano app, mabhora uye dzimwe nhau | Ndinobva mac
Uye ndezvekuti fungidziro dzaMark Gurman mushure mekutanga neMac Pro nyowani yakapihwa kuWWDC pamwe neiyo nyowani 6K HDR yekutarisa haimire ipapo. Gurman anosimbisa kuti kusvika kwenhau muwatchOS 6 kunopfuura kuvimbiswa uye pakati pevamwe vacho tichawana nzvimbo nyowani, mukana wekuverenga audiobooks, akati wandei ehutano maapplication uye nedzimwe nhau.
Chokwadi ndechekuti kufungidzira kwaGurman kunowanzo kuve kwakarurama uye tinogona kufunga kuti idzi ndidzo dzimwe dzenyaya dzatichawana mune vhezheni nyowani yeWOSOS ichaunzwa inotevera June muna San Jose.
Iyo mitezo yatinayo nhasi muWatchOS yakati wandei uye dzakasiyana asi zvinogara zvakanaka kuti zvimwe zvinowedzerwa. Mune ino kesi, izvo zvatinoudzwa naGurman ndezvekuti iwo angave maruva mumarudzi akasiyana siyana uye mamwe acho aine sarudzo dzinonakidza dzezvinetso, nekuti zvichatibvumidza kuti tiwedzere zvimwe zvacho mukuda kwedu. Iwo ma sphere chikamu chakakosha cheApple Watch uye semazuva ese mushanduro nyowani Apple ichawedzera zvimwe zvitsva. Mune ino kesi, pane kutaura kwerudzi rwechayo chayo chitoro chekushandisa, icho chinogona zvakare kubvumidza kugadzirwa kweakasarudzika maapplication ewatch kupfuura kuve neiyo iPhone nguva dzose padyo nayo, saka ichave iine rusununguko rwakawanda kubva kune iyo smartphone.
Nezve mafomu ehutano, anoti anogona kunge aine chekuita nemishonga nemarapirwo ayo uye nekuverenga ruzha kunze kwenyika. Chero zvazvingaitika, idzi mhando dzekushandisa, senguva dzose, dzinofanirwa kuona kwadzinowanikwa pekutanga, nekuti zvinogara zvichitsamira pamabasa avanoita uye nemvumo yavo. Zvinogona kuti isu tese tinowana pekutanga kana yambopihwa kubvira chimwe chazvo chichigona kutiyeuchidza kutora mishonga, imwe kudzora macircule uye yekupedzisira kuyera ruzha rwatinarwo rwakatikomberedza. Kuteerera manzwi manzwi kubva pawachi kana kuti kuverengera iro bhuku rezwi kungave dzimwe sarudzo dzatakatoverenga mune dzakapfuura runyerekupe dzinogona kuunza iyi vhezheni yeWOSOS 6. Pamusoro peAnimojis nyowani, zvimanamirira uye zvakafanana nezveMessage app. Tichaona kuti mangani aya enhau Gurman anorova.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » watchOS 6 ine nhau mune yehutano app, dials nyowani nedzimwe nhau
Isu tatoziva kuti Microsoft Edge ichave yei macOS: vanoratidzira dhizaini yavo mune yepamutemo vhidhiyo
Mark Gurman anofanotaura kuunzwa kweMac Pro uye 6K yekutarisa kuWWDC yegore rino